‘नेपाली साहित्य बजारमा गुणस्तरको एकदमै खाँचो छ’ – Dcnepal
‘नेपाली साहित्य बजारमा गुणस्तरको एकदमै खाँचो छ’
प्रकाशित : २०७८ भदौ ५ गते ७:३७
नेपाली साहित्यमा गरिमामय मानिने मदन पुरस्कार २०७७ का लागि नौं वटा कृतिहरु छनौटमा परेका छन् त्यसमध्ये आठ कृति पुरुष लेखकका छन् भने लेखक प्रभा बरालको पुस्तक ‘फिलिङ्गो’ महिला लेखकको रहेको छ ।
पचासको दशकदेखि नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेकी साहित्यकार प्रभा बरालले महिला सशक्तीकरणका विषयमा लेखेको फिलिङ्गोले २०७७ सालको मदन पुरस्कारको दाबी गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
साहित्यकार बरालका ‘शब्दहरु अविराम यात्रामा’ संयुक्त कविता संग्रह २०५७), ‘तृष्णाको पहाडरू’ (गजल संग्रह २०७०), ‘असिनाको कथा’ (बाल कविता संग्रह २०७१), ‘आत्महत्याको जंगल’ नियात्राको संग्रह २०७२) र ‘फिलिङ्गो’ (उपन्यास २०७७) गरी पाँच वटा कृतिहरु प्रकाशित छन्।
नियात्रा समाज नेपालको महासचिवसमेत रहेकी बरालले २०५१ सालमा ‘एउटा बाँच्ने रहर’ कविता मातृभूमि साप्ताहिकमा प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्यमा आफ्नो उपस्थिति जनाएकी थिइन् । नेपाली साहित्यमा एमफिल गरेकी उनी अध्यापन पेसामासमेत संलग्न छिन् ।
साहित्यको राजधानी पोखरामा जन्म लिएकी साहित्यकार बरालले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था र पित्तृसत्ताको शोषणमा परेकी महिलाको अस्तित्व निर्माणको कथामा आफ्नो कलम चलाइन् र फिलिङ्गोको जन्म दिइन्।
पैसाका लागि जीवनलाई दाउमा लगाउने विकासोन्मुख मुलुकका महिलाको सङ्र्घषपूर्ण कथाकी लेखक बरालसँग डिसी नेपालका लागि तर्कबहादुर थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
साहित्य लेख्ने जोस कसरी पलायो ?
यसरी नै भन्ने त छैन, विद्यालय जीवनमा नेपाली विषय पढ्दा नेपाली शिक्षकले लेख्न लगाउनु हुन्थ्यो । यसबाट कथा कविताप्रति आकर्षण बढ्दै गयो । एकपटक कास्की जिल्ला स्तरीय माध्यमिक कविता प्रतियोगिता भएको थियो । मेरो स्कूलबाट म छनौटमा परेँ र प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएँ । त्यस घटनाले मलाई निरन्तररुपमा साहित्यतर्फ आकर्षित ग¥यो ।
मैले त्यसपछि नियमित रूपमा कविता लेख्न सुरु गरेँ । औपचारिक त्यो भए पनि राष्ट्रिय स्तरको मातृभूमि भन्ने पत्रिकामा २०५१ सालमा ‘एउटा बाँच्ने रहर’ कविता छापिएपछि निरन्तररुपमा साहित्यमा नै लागिरहेकी छु ।
त्यो बेलामा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा आफ्नो कविता छापिँदाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
त्यतिबेला पत्रपत्रिका खासै धेरै प्रकाशन हुने थिएनन् । धेरै गाह्रो हुन्थ्यो रचना प्रकाशन गर्न । आफ्नो कविता पत्रिकामा आउँदा ठूलो कुरा लाग्थ्यो । पत्रिका किन्न पनि गाह्रो थियो । पोखराको महेन्द्रपुलमा गोरखापत्र बाजेको पसलमा गएर पत्रिका किन्नुपथ्र्यो । पत्रिकामा आफ्नो कविता छापिएको देख्दाको खुसी नै अलगै हुन्थ्यो । त्यो खुसी अहिले कहाँ पाउनु । अहिले त सामाजिक सञ्जालमा आफूले लेख्यो हाल्यो । प्रकाशन गर्न समस्या छैन । पत्रपत्रिका पनि कतिकति । उबेला जस्तो अहिले त छैन नि ।
फिलिङ्गोको प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
यसअघि साहित्यमा लागेका सर्कलले मलाई चिने पनि समग्र प्रभा बराललाई फिलिङ्गोले नै चिनाएको छ । मदन पुरस्कारको लागि छनोटमा परेपछि फिलिङ्गो र लेखकको खोजी भएको छ । फिलिङ्गोको दोस्रो संस्करण पनि प्रकाशित भइसकेको छ । राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी छु । सबैले सकारात्मक नै प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ । लेख्नै पर्ने विषयमा लेख्नु भयो भन्नु हुन्छ । लेखन मौलिक छ, पृथक छ भन्नु हुन्छ । लेखाइ, शब्द संरचना, भावको प्रस्तुति आदिले मन छोयो भन्नु हुन्छ । खुसी लाग्छ, यस्ता प्रतिक्रियाले ऊर्जा पनि प्राप्त भएको छ । आगामी दिनमा अझै काम गर्ने हौसला प्राप्त भएको छ ।
हामी अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा जतिसुकै लेखनकर्ममा भए पनि पुराना पुस्ताका गुरुप्रसाद मैनाली गोविन्द बहादुर गोठाले, विजय मल्ल, पारिजात, देवकुमारी थापा लगायतका पुरानै साहित्यकारलाई किन रुचाइरहेका छौं ? नयाँपुस्ताले लेखेको विषयले किन पाठकको मनलाई तान्न सकेको छैन ? त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । संख्यात्मक रूपमा साहित्यकार मात्र थपिएर भएन।
महिलालाई केन्द्रमा राखेर यहाँले फिलिङ्गो लेख्नु भएको छ । पुरुषहरुले पनि पुस्तक पढ्नुहुन्छ होला । महिला र पुरुषको प्रतिक्रिया एक नासको छ कि फरक छ ?
महिलाको बारेमा लेखेको छु । पुरुष पाठकहरुले नै किन आक्रामक भएर लेख्नु भएन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सीमान्ती अझै बोल्ड हुनु पथ्र्यो भन्ने खालका प्रतिक्रिया पाइरहेकी छु । यसको मतलब महिलालाई केन्द्रमा राखेर लेखेको भएता पनि पुरुषहरुले पनि विरोध नगर्ने गरी लेखेकी रहेछु भन्ने लागेको छ । महिला साथीहरुको पनि प्रतिक्रिया त सकारात्मक नै छ ।
जापानमा नेपालबाट गएकी महिला र सङ्घर्षको कथा उपन्यासमा लेख्नु भएको छ । यो लेख्ने भावना कसरी जागृत भयो ?
साहित्यमा लागेको मान्छेले केही न केही नविनतम विषयको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । नयाँ ठाउँमा गएपछि, नयाँ कुरा देखेपछि त्यो कुराले छुँदो रहेछ । म पनि लेखनमै लागेकी मान्छे । पहिलो पटक जापान जाँदा मैले नियात्रा ल्याइसकेकी थिएँ ।
पछिल्लो पटक फेरि पनि जापान जाने अवसर पाएँ । केही लेख्नु पर्छ भन्ने सोचमा थिएँ, नेपालबाट वर्षौ अघि जापान गएका दिदीबहिनहरुसँग भेटघाट भयो । उहाँहरुका कथा सुनेँ । मार्मिक थिए ती कथा । यी कुरा सबैले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो ।
उहाँहरुको दैनिकी पनि देखेँ, भोगेँ । उहाँहरुको कथा सुनेपछि र आफैले अवस्था बुझेपछि, झन् लेख्नै पर्छ भन्ने लाग्यो र फिलिङ्गो लेखेकी हुँ ।
आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र नभएसम्म महिलाहरुमा सशक्तीकरण आउँदैन भन्ने आशय हो ?
अवश्य पनि । जापानकै कुरा गर्ने हो भने जति पनि दिदीबहिनीहरु जानु हुन्छ, कोही विद्यार्थी भिसामा, कोही डिपेन्डेन्ट भिसामा । जसरी गए पनि उहाँहरुले जति कमाउनु हुन्छ त्यसको हकदार र त्यसलाई परिचालन गर्ने अर्कै मान्छे हुन्छन् । उहाँको घर परिवार, श्रीमान आदि । आफूले कमाएको आर्जन श्रीमान वा परिवारको हातमा पारेपछि भोलिपल्टदेखि नै ती दिदीबहिनी पुनः अरुमा निर्भर भएर बाँच्नु पर्ने अवस्थाको श्रृजना हुन्छ । आफूले महिना दिनसम्म दुःख गरेर कमाउने तर आफू आर्थिकरुपमा स्वालम्बन नहुने । आफ्नो कमाइमा स्वामित्व कायम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
परिवारलाई दिएपछि उहाँहरुकै निगाहमा चल्नु पर्ने परिस्थिति देखिएको छ । त्यो त्यहाँको मात्र कुरा नभए सम्पूर्ण देशमा कमाइ गर्न जाने र नेपालमै पनि कमाइ गर्ने हरेक महिलाको वास्तविकता हो । त्यसैले पनि मैले आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरालाई अलि बढी जोड दिएर उठाएकी हुँ ।
शिक्षाको कमी भएका कारण चेतना आएन । चेतना नभएपछि आफ्नो कमाइमा पनि आफूलाई स्वस्फूर्तरूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनेन । मेरो कमाइ कस्तो ठाउँमा लगानी भएको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरुले थाहा पाउनु हुन्न । आफ्नो कमाइ अरुको हातमा दिँदा भोलीको जीवनमा कस्ता खालका अफ्ठेराहरु आउलान्, त्यो अफ्ठेरो परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छन् ।
यी सम्पूर्ण कुराको निचोड के भन्दा, आर्थिक स्वतन्त्रता नभएसम्म महिलामा परिवर्तन आउँदैन र आए पनि देखिँदैन भन्ने नै हो । यदि आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र भइएन भने स्वतन्त्र अनुभव नै गर्न सकिँदैन र मानसिक सुख पनि पाइदैन । आत्मनिर्णयको क्षमताको विकास पनि हुँदैन । पैसा कमाउनु भन्दा ठूलो कुरा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न सक्नु र त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नु हो ।
नियात्रा समाज नेपालको महासचिव हुनुहुन्छ । फेरि उपन्यासतिर किन लाग्नु भयो त ?
नियात्रा पनि लेखिरहेकी छु । जापानसँग नै सम्बन्धित ‘आत्महत्याको जंगल’ भन्ने नियात्रा लेखेकी छु । अरु पनि सोचमा छन् । एउटै विधामा खुम्चिन पर्छ भन्ने छैन । फेरि नियात्राभित्र मैले देखेका कथाहरु समेट्न सकिने थिएन । त्यसैले आख्यानको आवश्यक्ता देखेँ ।
मैले उपन्यास लेखनमा नै दिदीबहिनीले भोगेको कथालाई न्याय गर्छु जस्तो लाग्यो र उपन्यास लेखेँ । मैले आख्यानमा काम गर्ने मनस्थिति पनि बनाएकी थिएँ । यही कारण पनि यो उपन्यासमा आएकी हुँ ।
यहाँको गजल, कविता, नियात्रा र उपन्यास विधाका संग्रह बजारमा छन् । कुन विधा लेख्न सजिलो ठान्नुहुन्छ ?
लेखनीमा सजिलो त कुनै पनि विषय हुँदैन । हरेक विधामा कलम चलाउँदा त्यतिकै साधनाको आवश्यक्ता पर्छ । तुलनात्मक लेखनीको कुरा गर्दा नितान्त मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा नियात्रा लेख्दा अलि सजिलो जस्तो अनुभव गरेँ । यसमा आफ्ना अनुभूतिहरु खुलेर लेख्न पाइन्छ । बरु, गाह्रो मलाई उपन्यास लेख्न लाग्यो । उपन्यासमा कथावस्तुमा धैर्य देखाएर बारम्बार पुनर्पठनदेखि, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । पात्रहरू प्रति न्याय गर्न सक्नु पर्छ । लामो समयसम्म एउटै विषयलाई लिएर, भाषाशैली आदि विषयमा निरन्तर लागिरहनु पर्ने भएकाले अलि गाह्रो लाग्यो ।
कवितामा हुने बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग नियात्रा र उपन्यासमा हुन्छ कि हुँदैन ?
नियात्रा र उपन्यासमा पनि लेखनीलाई पठनयोग्य बनाउनका लागि सुन्दर भाषाशैलीको प्रयोग गरिन्छ, कलात्मक भाषाको प्रयोग हुन्छ । काव्यात्मक बनाउने प्रयास हुन्छ ।
फिलिङ्गो मदन पुरस्कारका लागि छनोट पनि भएको छ, पुरस्कार पाउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा त मेरो वशमा छैन । मैले भन्न सक्ने कुरा पनि हैन । मदन पुरस्कारको लागि छनौटमा परेका नौ वटा कृतिमा फिलिङ्गो पनि परेको छ । यो परेपछि नै मलाई पुरस्कार पाएको जस्तै अनुभूति भएको छ । उत्साह र हौसला मिलेको छ । पाठकहरु बढ्नु भएको छ । अर्को कृतिमा काम गर्ने हौसला प्राप्त भएको छ । नौ वटा कृतिहरुलाई अध्ययन गर्दा फिलिङ्गो सशक्त कृति छ, कमजोर छैन भन्ने लागेको छ ।
हरेक कृतिहरुको आ–आफ्नो विशेषता छ । छनौट समितिले पनि केही देखेर नै छनौट गर्नु भयो होला । फिलिङ्गोमा नारीसत्वको कुरा उठाइएको छ । महिलाको सत्वलाई आधार बनाएर लेखिएको कारण पनि यो अझै बलियो रुपमा प्रस्तुत भएको छ भन्ने लाग्छ ।
नेपाली साहित्यकारलाई किताब प्रकाशनका लागि ठूलो समस्या बेहोर्नु पर्छ भनिन्छ, यहाँको अनुभवले के भन्छ ?
प्रकाशनका पीडाहरु यति ठूलो छ कि एकदमै लामो बहस हुन सक्छ । सरकारीस्तरमा यस्ता खालका प्रकाशन गृहहरु छैनन् । एउटै साझा प्रकाशन थियो त्यसको पनि कन्तबिजोग पारेर छोडेका छन । लेखकले लेख्ने कि छाप्ने । बजार वितरण गर्ने कि, एकदमै जटिल र पीडादायी कुरा छ ।
धेरै जसो लेखकहरु यो कुरालाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ । एक दर्जन पाण्डुलिपि लिएर प्रकाशन गृहको खोजीमा भौतारिरहेका लेखकहरु पनि देखिएको छ । कति जनाको आ–आफ्नो पकडका व्यक्तिहरुको पुस्तक छापिने गरेको पनि बजारमा सुन्न पाइन्छ । मैले पनि फिलिङ्गो भन्दा पहिलाका कृतिहरुमा यो पीडा भोगेकी हुँ ।
नेपाली साहित्यमा आउने पुस्तालाई के सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?
नेपालमा हरेक क्षेत्रमा विकास हुन बाँकी छ । देश विकास भयो भने नै सबै क्षेत्रहरु विकसित हुन्छन् । हामीले लेखेका साहित्यहरु अनुवाद नभएर विदेशी पाठकहरुले पढ्न पाएका छैनन् । त्यो पीडा अलगै छ । हामी नेपालमै सीमित भएका छौं, खुम्चिएर बसेका छौं त्यो कुरा हुँदाहुँदै पनि साहित्यमा नयाँ प्रवेश गर्नेहरुको उत्साह राम्रो छ । त्यो खुसीको कुरा हो ।
अहिले प्रतिस्पर्धाको जमाना छ । यो जमानाअनुसार हामी आफूलाई एकदमै गुणात्मक रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्नुु पर्छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि प्रशस्त मात्रामा अध्ययन गर्नुपर्छ । जबसम्म अध्ययन गरिँदैन, साधना गरिँदैन, साहित्यमा निखारपन आउँदैन । नयाँ पन आउँदैन । पहिला त आफ्नो समाज पढ्नु प¥यो, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समाज पनि पढ्नु प¥यो । अनिमात्र साहित्यमा लाग्नुस् भन्न चाहन्छु । नेपाली साहित्य बजारमा गुणस्तर लेखनको एकदमै खाँचो छ ।